Tube Ubude: 6m / 8M
Tube ubukhulu: 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
Kusebenza izinhlobo tube: Round tube, tube sikwele, tube elingunxande, tube okusaqanda, steel ezimise D-, steel ezimise T-, steel emise H-, steel isiteshi, engela steel, njll
Izinto esebenzayo: Insimbi engagqwali, carbon steel, ngensimbi lashukumisa, ithusi, aluminium, zethusi, ingxubevange, njll
Ubuningi ukulayisha isisindo: 25kg / m
Tube Ubude: 6000mm
P2060 / P3080 tube laser cutting umshini ukhiqiza eliphezulu ezingxenyeni ezihlukahlukene ngezindlela ezihlukahlukene futhi ayilingani. Ngokusebenzisa yayo fibre laser cutting ubuchwepheshe, izinqubo eziningi zingahlanganiswa emshinini owodwa. Njengoba izindawo eziningi zidinga izinqubo eziningi, ezifana sawing bendabuko, imishini, machining, isibhakela futhi umbhalo, P2060 / P3080 tube fibre laser cutting umshini ongenza zonke lezi izinqubo emshinini owodwa.
I laser tube ahlabayo umshini ifakwe Loader inhlukano okuphrezenta tube ku-opharetha lekumele abese beka tube emshinini futhi ngesandla qinisa chuck. Ukuhlanganisa zonke lezi izinqubo ku omunye umshini yiwona konga isikhathi kanye nezindleko uma sicubungula amashubhu ngamaqoqo ezinkulu kodwa imishini yizinhlobonhlobo ivumela umsebenzisi kalula ukwenza prototypes noma ukukhiqizwa encane batch.
Lokhu tube laser umsiki futhi isebenzisa ngesivinini servos for esheshayo eqondile ukuma okuyinto kunciphisa isikhathi non-value ukunyakaza wanezela. Lezi servos esinejubane ngokuhlanganyela enamandla fibre laser kungehlisa ingxenye ukusika izikhathi nokwandisa umkhiqizo sivumela ukubuya ephakeme ku utshalomali umsebenzisi sekupheleni.
Lokhu umsiki laser tube nayo ifakwe ebiyelwe ngokugcwele ukuqinisekisa opharetha iphephile lapho umshini iyasebenza.
GOLDEN laser sizonikeza inkonzo yesikhathi nokusekela kwethu laser imishini , kuhlanganise isitokwe egcwele izingxenye ezisele futhi izingxenye ukuqinisekisa amakhasimende ethu thola esikhundleni izingxenye ngokushesha nangempumelelo.
Tube laser cutting umshini izici
Chuck futhi adjustable ngocingo ukwesekwa idivayisi ephakamisa londoloza incele, ukuqinisekisa concentricity, ukuvimbela ipayipi liyaphambuka.
Okuzenzakalelayo ukuskena tube.
Thola ngokuzenzakalela Centre
Khulisa ukukhiqiza, ukuqinisekisa imikhiqizo izinga.
Mark izingxenye kanye ithrekhi ahlabayo.
Fast ekhoneni impendulo, kakhulu ekuthuthukiseni ukusika kahle.
Lungisa Speed ​​ngokuzenzakalela
Ngo isimo ahlabayo okusheshayo, kungaba sifinyelele izinga ahlabayo esimeme.
Londoloza zabasebenzi kanye ukuvimbela workpiece ekubeni emibi.
Ehamba phambili emhlabeni fibre laser elalinembobo kanye nezinto zikagesi ukuqinisekisa umshini ukuzinza aphakeme.
Advanced chuck uhlelo clamping
Chuck isikhungo yokuzithiba ukulungiswa, ulungisa ngokuzenzakalelayo amandla clamping ngokulandela imiyalo iphrofayli ukuqinisekisa ukuthi tube mncane alilinyaziwe.
Dual isisusa chucks kukhona iyahambisana ezihlukahlukene amapayipi asikho isidingo esikhundleni noma ulungise emihlathini.
Long-stroke ngocingo. Lapho ubukhulu ipayipi is esukela ngaphakathi 100mm, asikho isidingo ukulungisa ngocingo.
Multi-eksisi (ukusuthisa-eksisi, chuck Ukujikeleza ahlangene laser cutting ikhanda) nokuxhumanisa phakathi ukujikeleza ikhanda ahlabayo.
kudivayisi ukubuthwa okuzenzakalelayo
Idivayisi elintantayo ukwesekwa iqoqa amaphayiphi siphelile ngokuzenzakalelayo.
Ukusekelwa elintantayo ilawulwa motor Servo futhi ungalungisa iphuzu ukwesekwa ngokuvumelana ubukhulu ipayipi ngokushesha.
I elintantayo iphaneli losekelo ubambe elikhulu ububanzi ipayipi uvalwe.
Okuzenzakalelayo Ukusekela Floating
Ngokusho ushintsho isimo sengqondo ipayipi, ukuphakama ukwesekwa kungenziwa alungiswa nge-othomathikhi ngesikhathi sangempela ukuqinisekisa ukuthi phansi ipayipi uhlale nolimi kusuka phezulu kushaft ukwesekwa, edlala indima ngamandla usekela ipayipi.
Zokushisela umphetho ukuhlonza
Isikhundla Welding umphetho ipayipi bungabonakala ukuqinisekisa ukuthi isikhundla ahlabayo ugwema umphetho Welding phakathi kwenqubo futhi ugweme inkinga ka ukuqhumisa Izimbobo umphetho Welding.
Ukuze ipayipi izimisele futhi sikhubazekile, okuzenzakalelayo ukulungiswa umsebenzi ningakuqaphela ihlukene onqenqemeni search, futhi ngokuzenzekelayo ulungise ukuphambuka ukuthola iphuzu maphakathi ipayipi lwalugobile ukusika ukuqinisekisa ukunemba ahlabayo.
Lapho ukusika engxenyeni yokugcina tube, ngaphambili chuck emihlathini zivulwa ngokuzenzakalelayo, udlule ezingemuva chuck emihlathini ngokusebenzisa phambi chuck ukunciphisa ukusika endaweni abayizimpumputhe.
Tube ububanzi esingaphansi 100 mm sokumosha izinto 50-80 mm
Tube ubukhulu ezingaphezu kuka-100 mm kanye sokumosha izinto 180-200 mm
Ongakukhetha - eksisi lwesithathu wokuhlanza odongeni kwangaphakathi kudivayisi
Ngenxa laser cutting inqubo, slag nakanjani abanamathela ingxenye odongeni engaphakathi ipayipi okuphambene. Ikakhulukazi, amapayipi nge diameters ezincane kuyodingeka slag ngaphezulu. Ukuze ezinye izinhlelo zokusebenza ukuba bazikhandle kakhudlwana, idivayisi kushaft ethola lwesithathu kungenziwa wanezela ukuvimbela slag Ukunamathela odongeni kwangaphakathi.
Tube laser isofthiwe umshini ahlabayo
isofthiwe German ukulawula PA
Ikhasi elilodwa uqeda yonke imisebenzi ngaphezulu kusebenziseka kalula!
Ngokushesha ngezifiso isixhumanisi, kuwusizo kakhudlwana!
Engeza ezimele uphethwe esibonakalayo ukuze uxazulule ngokushesha on-site izinkinga, nohlakaniphe kakhulu!
Lantek Flex3d isekela ezihlukahlukene ipayipi izinhlobo
Standard tube lwemsebenti: Round tube, tube sikwele, OB-uhlobo tube, D-uhlobo tube, unxantathu tube, tube okusaqanda, njll
Futhi ipayipi of ubukhulu ilingana ekhethekile emise.
Ngesikhathi esifanayo, flex3d has amamojuli obusebenzayo for iphrofayli ahlabayo , ezingasetshenziswa ukusika engela steel, ngensimbi wesiteshi steel emise H-, njll
izinhlobo esebenzayo laser cutting tube
uhlobo Standard (uhlobo avaliwe)
Round tube, tube sikwele, tube elingunxande, tube okweqanda, tube okusaqanda, D-uhlobo tube, Triangle tube ...
uhlobo Modular (Non-avaliwe uhlobo)
Isiteshi steel, U-steel, engela steel, T-hlobo, H-hlobo, lath steel ...
ukuzisika tube amasampula Laser
Fibre Laser Pipe / Tube Cutting Machine Technical sepharamitha
Khombisa CHA .: P2060 / P3080
pipe obuphelele 6000mm / 8000mm
pipe ubukhulu 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
umthombo Laser IPG / nLIGHT fibre laser
Laser Amandla 700W ~ 6000W
Phinda ukuma ukunemba ± 0.03mm
Isivinini ukuma 90M / iminithi
Okuzenzakalelayo eyinqwaba Loader Tube Laser Cutting Machine
Okugcwele Kuvaliwe Fibre Laser Cutting Machine nge Pallet Exchange Ithebula
Vula Uhlobo Fibre Laser Cutting Machine
Dual Umsebenzi Fibre Laser Metal Ishidi & Tube Cutting Machine
Tube Laser Cutting Imboni Machine Isicelo
Ifenisha, wedivaysi yezokwelapha, imishini nobungqabavu, uwoyela kwehlwaywe, ukubonisa eshalofini, ipulazi imishini, ibhuloho, lokuthumela, isakhiwo izingxenye, njll
Tube Laser Cutting Machine Isicelo Material
Round, iinkwere, uncamane, okusaqanda, okhalweni round tube nezinye amapayipi metal.
<< Funda kabanzi mayelana Tube Laser Cutting Amasampula
Fibre laser ukujiya cutting metal laser amandla ezahlukene
Sicela uxhumane Golden Laser ngoba sebhithi ngaphezulu kanye nekhotheshini mayelana fibre laser cutting umshini . Impendulo yakho imibuzo elandelayo kuyosisiza ukuncoma umshini ofanele kakhulu.
1. Yiluphi uhlobo metal okudingeka ukusika? Metal ishidi noma tube? Carbon steel noma insimbi engagqwali noma aluminiyamu noma steel lashukumisa noma zethusi noma ithusi ...?
2. Uma ukusika uthayela, uyini ukujiya? Yini Usayizi zokusebenza umzimba oludingayo? Uma ukusika tube metal noma ipayipi, yini odongeni ukujiya, ububanzi nobude ipayipi / tube?
3. Uyini umkhiqizo wakho siphelile? Kuyini umkhakha isicelo sakho?
4. Igama lakho, igama lenkampani, ikheli, yocingo (WhatsApp) kanye website?
Model Cha: GF-1530T
Model Cha: P2060A / P3080A
High ukusebenza tube laser cutting mshini ukulayisha okuzenzakalelayo futhi athula. Ukuphuca round, unxande, sikwele namanye amaphrofayli tube ukwanelisa uhla lwezidingo tube ahlabayo.
Model Cha: P2080